Iakhawunti ezili-10 ze-Instagram eziza kukunceda uyile ngcono | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iakhawunti ezili-10 ze-Instagram eziza kukunceda uyile ngcono
USusana Do Carmo | | I intanethi
Naluphi na uphawu olufuna ukugqama kwaye luzimise emarikeni, kufuneka lubenalo umfanekiso ophezulu womfanekiso, ukusuka kwilogo kunye nobunikazi benkampani, kwiintengiso kunye nomxholo kwiwebhu. Ukunika umxhasi umfanekiso owudinga inkampani yakho luxanduva kuthi abayili.
Ukufezekisa uyilo olulungileyo, kubalulekile ukuba sinako izingqinisiso ezilungileyo kwaye wazi ukuba zeziphi ezona meko zangoku. Ngolwazi oluninzi kunye nemifanekiso kwi-intanethi nakumajelo asekuhlaleni, ngamanye amaxesha kunzima ukukhetha apho ujonga khona.
Apha sikushiya iakhawunti ezili-10 ze-Instagram ezinomxholo obonakalayo obonakalayo kwimisebenzi yakho elandelayo.
Phantse ukufikelela kwisigidi sabalandeli, yenye yeereferensi zokuqala zeakhawunti ye-Instagram iilogo. Izisa ezona logo zoyilo zibalaseleyo kwihlabathi liphela, ukuze ufumane iingcinga phantse yonke into uhlobo lweshishini kunye nophawu. Uyakonwabela ukubona le profayile igcwele imibala, ubuntu obuninzi kunye nemifanekiso ekumgangatho ophezulu.
Iprofayile ye-Instagram yeakhawunti @logoinspiration
Enye yeeprofayili ezilandelwa ngokwemiqondiso yeelogo. Ukuba ujonga izimvo zoyilo lwe ezimibalabala kunye neesotypes ezimnandi, Le akhawunti intle kakhulu Imizobo kunye nemifanekiso, iyenza ibe yenye yezona ndawo zithandekayo kwi-Instagram.
Ukwenza ilogo yinkqubo ethatha ixesha kunye namanyathelo anokulandelwa. Le profayile iluncedo kuba iyasibonisa uyenza njani le nkqubo. Ukusuka okwahlukileyo iziketshi ngombono ofanayo, kude kube Iigridi kunye nemilinganiselo kuphuhliso lweesotypes kunye neefonti. Ukongeza, inabalandeli abaphantse babe ngama-300 amawaka kunye noyilo loyilo olukhulu.
Njengoyilo kunyanzelekile ukuba ulandele iakhawunti yePantone. Yonke into ekufuneka uyazi ngayo Iphalethi yombala, indlela yokudibanisa kunye nokusetyenziswa kwazo kwimidiya yedijithali kunye nokuprinta kulapho. Iifoto ezikwi-akhawunti zinomtsalane kakhulu kwaye zinokukhuthaza. Kwaye ukuba uyithathele ingqalelo umsebenzi owenzayo kulo nyaka, I-Coral ephilayo 16-1546 ikhethwe yiPantone njengombala we-2019.
Iprofayile ye-Instagram yeakhawunti @pantone
Ngamanye amaxesha izinto ezilula njengezinto, imbonakalo yomhlaba okanye ifoto ziye ezibangela uyilo. Yiyo le nto @graphicroozane imalunga nayo, imisebenzi yamaqela kunye nemifanekiso ephefumlelweyo yimeko yemihla ngemihla ethi, ngobuchule bokwenza izinto ngamagcisa, inokujikwa ibe yinto engaqhelekanga okanye ehlekisayo. Ukuba uyafuna izimvo ezingaqhelekanga, Le yingxelo ekufuneka uyilandele.
Izinto zokubhala, ukupakisha, iilebheli, kunye nezinye iziqwenga zemizobo, zezona zinto ziphambili zale akhawunti ezijolise ekuphawuleni, oko kukuthi, kwi uphawu olubonakalayo lophawu isetyenziswe kuwo onke amalungu ayo kunye neemveliso. Umzobo olungileyo kufuneka ube nolungelelwaniso kunye nokungaguquguquki, kwaye apha basibonisa indlela yokwenza
Iprofayile ye-Instagram yeakhawunti @welovebranding
Bathi ngekhe uyigwebe incwadi ngesembozo sayo, kodwa ayisebenzi kwilizwe loyilo. Le profayile yindawo yoyilo yokuhlela kwi-Instagram, enikezelwe ngokukodwa kuyo uyilo lwekhava kunye nolwakhiwo lweencwadi Ngowona mgangatho uphezulu. Landela le akhawunti ukuba ufuna izimvo ezilungileyo kuyilo lwencwadi.
Ngokungafaniyo @graphic_books, @designersbookshop inegalari enikezelwe kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi zokuhlela kubandakanya iimagazini, iincwadi, iikhathalogu kunye nokupakishwa kwemveliso. Izindululo zomzobo eziqokelelwa yile profayile zi Eqaqambileyo, enemibala kwaye izele bubuchule bokwenza izinto.
Iprofayile ye-Instagram yeakhawunti @designersbookshop
Ukuthengiswa kwegama ngothungelwano lwentlalo kunye newebhusayithi kubalulekile njengopapasho lwentengiso, yiyo loo nto kufuneka sigcine iiprofayili zedijithali zihlaziyiwe kwaye zinomxholo osemgangathweni. Le akhawunti ngumzekelo olungileyo wokwenza uyilo lwamaphepha ewebhu, izithuba zonxibelelwano zentlalo kunye neevenkile ezikwi-intanethi.
Ukuba uyilo lwe-UI, ngaphandle kwamathandabuzo le akhawunti iya kukunceda. Ngemfuno ephezulu ye Uyilo lwe-UI Kule mihla, kwaye sithathela ingqalelo ukuba amava abasebenzisi kwi-intanethi aya ngokufuna ngakumbi, uyilo lwe-interface kufuneka lube nomtsalane kakhulu, lomgangatho ophezulu wokubonakalayo, ofikelelekayo nolula ukuyisebenzisa.
Iprofayile ye-Instagram yeakhawunti @graphicdesignui
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I intanethi » Iakhawunti ezili-10 ze-Instagram eziza kukunceda uyile ngcono